Waa maxay huurka iyo muhiimadiisa xaga saadaasha hawada | Saadaasha Shabakadda
Muhiimadda qoyaanka ee saadaasha hawada
Qoyaanku waa isbeddel muhiim ah oo saadaasha hawada ah maxaa yeelay uumiga biyaha ayaa had iyo jeer ku jira hawadeena. Iyadoo aan loo eegin heerkulka hawada aan neefsanno, waxay had iyo jeer leedahay xoogaa uumiga biyaha ah. Waxaan u baranay inaan aragno qoyaan gaar ahaan maalmaha qaboobaha.
Biyaha ayaa ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ee jawiga waxaana laga heli karaa dhammaan saddexda gobol (gaas, dareere, iyo adke). Maqaalkan waxaan ku sharaxayaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato oo ku saabsan huurka sida isbeddelka saadaasha hawada iyo waxa loogu talagalay. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato?
1 Waa maxay qoyaanku? Noocyada huurka
2 Goorma ayaa cufnaanta hawadu noqoto mid dhergaan?
3 Sideen u samaysan karnaa cufnaanta hawada?
4 Maxay daaqadaha baabuurtu u qiiqaan sidee baanse uga saaraan?
5 Sideed u cabirtaa qoyaanka iyo uumiga?
Waa maxay qoyaanku? Noocyada huurka
Qoyaanku waa xaddiga uumiga biyaha ee hawada ku jira. Lacagtani ma ahan mid joogto ah, laakiin waxay ku xirnaan doontaa arrimo kala duwan, sida haddii ay dhawaan roob da’een, haddii aan badda ku dhow nahay, haddii dhir ay jiraan, iwm. Waxay sidoo kale kuxirantahay heerkulka hawada. Taasi waa, maadaama hawadu hoos u dhigayso heer kulka waxay awood u leedahay inay hayso uumiga biyaha oo yaraada waana taas sababta ceeryaantu u soo baxdo markaan neefsanno, ama sayaxa habeenkii. Hawada ayaa ku buuxsamaysa uumiga biyaha mana awoodo inay ceshato inta badan, sidaas darteed biyuhu mar labaad ayey dareerayaal noqdaan.
Waa wax xiiso leh in la ogaado sida hawadu saxaradu u awood u leedahay inay hayso qoyaan ka badan kuwa hareeraha hawada, maxaa yeelay hawada kulul si dhakhso leh ugama buuxsamo uumiga biyaha waxayna awood u leedahay inay ku jirto tiro badan, iyadoon u noqon biyo dareere ah.
Waxaa jira dhowr qaab oo loo tixraaco qoyaanka ku jira jawiga:
Qoyaan la'aan tiro uumiga biyaha, oo garaam ah, kuna jira 1m3 hawo qalalan.
Qoyaan gaar ah: tiro uumiga biyaha, oo garaam ah, kuna jira 1 kg oo hawo ah.
Raagga qas: tiro uumiga biyaha, garaam ahaan, 1 kiilo oo hawo qalalan ah.
Si kastaba ha noqotee, qiyaasta ugu badan ee loo isticmaalo qoyaan waxaa loo yaqaan RH, taas oo lagu muujiyo boqolkiiba (%). Waxaa loo helaa iyada oo loo kala qaybinayo inta udhaxeysa uumiga hawada iyo culeyska ugu badan ee keydinta iyo isku dhufashada 100. Waa tan aan horay uga faallooday, heerkulka intaa le'eg ee hawo leeyahay, heerkulka badan ee ay awood u leedahay inay hayso uumi badan oo biyo ah, sidaa darteed qoyaan ahaan u dhigma ayaa ka sareyn kara.
Goorma ayaa cufnaanta hawadu noqoto mid dhergaan?
Awoodda ugu badan ee lagu hayn karo uumiga biyaha waxaa loo yaqaannaa cadaadiska uumiga dheregsan. Qiimahani wuxuu inoo sheegayaa qadarka ugu badan ee uumiga biyaha ee cufnaanta hawadu ka koobnaan karto ka hor inta aan loo beddelin biyo dareere ah.
Waad ku mahadsan tahay qoyaanka qaraabada ah, waxaan fikrad ka heli karnaa sida ugu dhow ee hawadu u dhowdahay inay gaadho buuxinteeda, sidaa darteed, maalmaha aan maqalno in qoyaanka qaraabada uu yahay 100% ayaa waxay noo sheegayaan in hawadu aysan sii jirin keydin kara uumiga biyaha oo intaa ka badan, ku daris kasta oo biyo ah cufnaanta hawada waxay sameyn doontaa dhibco biyo ah (oo loo yaqaan dhado) ama kiristaalo baraf ah, iyadoo kuxiran xaaladaha deegaanka. Caadi ahaan tani waxay dhacdaa marka heerkulka hawadu uu aad u hooseeyo waana taas sababta aysan u haysan karin uumiga biyaha. Markay heerkulka hawadu kororto, waxay awood u leedahay inay qabato uumiga biyaha badan iyadoo aan la dheregayn waana sababtaas sababta aysan u sameysmin dhibco biyo.
Tusaale ahaan, meelaha xeebta ah, xagaaga waxaa jira qoyaan badan iyo kuleyl "dhegdheg" ah sababo la xiriira xaqiiqda ah in dhibcaha mowjadaha maalmaha dabeylaha ay ku sii jiraan hawada. Si kastaba ha noqotee, heerkulkeeda sarreeya awgeed, ma sameyn karaan dhibco biyo ah ama ma buuxsami karaan, maadaama hawadu kaydin karto uumiga biyaha badan. Waa sababta uusan dharabku u samaysan xagaaga.
Sideen u samaysan karnaa cufnaanta hawada?
Si tan loogu fahmo si sax ah, waa inaan ka fikirno markaan ka soo bixinno uumiga biyaha afkeena inta lagu jiro habeennada jiilaalka. Hawadaas aan neefsanayno markii aan neefsanayno waxay leedahay heer-kul iyo uumiga biyaha oo cayiman. Si kastaba ha noqotee, markay ka soo baxdo afkeenna oo ay taabato hawo qabow oo ka baxsan, heerkulkeedu si aad ah ayuu hoos ugu dhacaa. Qabowgeeda awgeed, cufnaanta hawadu waxay lumisaa awoodda ay ugu jirto uumiga, si fudud u gaadhitaan saturation. Markaas uumiga biyuhu wuu uruuraa oo wuxuu sameeyaa ceeryaamo.
Mar labaad, waxaan iftiiminayaa in tani ay tahay isla farsamadii dharabka ka dhalaalaya gaadiidkeennu ay ku sameysmaan habeennada qaboobaha. Sidaa darteed, heerkulka ay tahay in hawo tiro ah la qaboojiyo si loo soo saaro uumis, iyadoo aan la kala beddelin uumigiisa, waxaa loo yaqaan heerkulka sayaxa ama sayaxa.
Maxay daaqadaha baabuurtu u qiiqaan sidee baanse uga saaraan?
Si loo xaliyo dhibaatadan nagu dhici karta xilliga jiilaalka, gaar ahaan habeenkii iyo maalmaha roobka, waa inaan ka fikirnaa buuxinta hawada. Markii aan gaariga fuulno oo aan ka nimaadno dariiqa, uumiga biyaha ee gaariga wuxuu bilaabayaa inuu koro sida aan u neefsanayno iyo, heerkulkiisa oo hooseeya awgood, si dhakhso leh ayuu u dheregsan yahay (qoyaankiisa u dhigma ayaa gaaraya 100%). Marka hawada gudaha gaariga uu noqodo mid buuxa, waxay keentaa in daaqadaha ay qiiqaan maxaa yeelay hawadu mar dambe ma sii haysan karto uumiga biyaha, haddana waxaan sii wadeynaa neefsashada iyo soo saarista uumiga biyaha badan. Taasi waa sababta ay hawadu u noqoto mid dheregsan oo wixii soo kordha oo dhan loo beddelo biyo dareere ah.
Tani waxay dhacdaa maxaa yeelay waxaan ilaaliney heerkulka hawada si joogto ah, laakiin waxaan ku darnay uumiga biyaha badan. Sideen tan ku xallin karnaa oo aan u sababi karin shil sababtoo ah aragtida hoose ee muraayadda ceeryaanta ah? Waa inaan isticmaalnaa kuleylka. Isticmaalka kuleylka oo ku hagaaji kareemada, Waxaan kordhin doonnaa heerkulka hawada, taas oo u suurta gelin doonta inay keydiso uumi badan oo biyo ah iyadoo aan laga dheregsanayn. Sidan oo kale, daaqadaha ceeryaanta ayaa baabi'i doona oo si fiican ayaan u wadi karnaa, annaga oo aan wax khatar ah soo kordhin.
Sideed u cabirtaa qoyaanka iyo uumiga?
Qoyaanka badanaa waxaa lagu cabiraa qalab loo yaqaan psychrometer. Tani waxay ka kooban tahay laba heerkulbeeg oo isku mid ah, midkood, oo loo yaqaan "heerkulbeeg qalalan", ayaa si fudud loogu adeegsadaa helitaanka heerkulka hawada. Midda kale, oo loo yaqaan "heerkulbeeg qoyan", ayaa leh keydka oo lagu daboolay shabakad qoyan iyada oo loo adeegsanayo silsilad kaas oo ku xiriirinaysa kayd biyo ah. Hawlgalku waa mid aad u fudud: biyaha qoya webka ayaa uumi bixiya taasna waxay kuleylka uga qaaddaa hawada ku hareeraysan, oo heer kulkeedu bilaabmo inuu hoos u dhaco. Waxay kuxirantahay heerkulka iyo uumiga bilowga ah ee cufnaanta hawada, xaddiga biyaha la uumiyey ayaa ka sii weynaan doona ama ka yaraan doona isla xaddigaasna waxaa jiri doona hoos u dhac weyn ama ka yar heerkulka heerkulbeegga qoyan. Iyada oo ku saleysan labadan qiyam, qoyaanka qoyaanka ah waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la adeegsanayo qaab xisaabeed iyaga la xiriira. Si loogu fududaado, heerkulbeegga waxaa la siiyaa miisaska laba laab oo si toos ah u siiya qiimaha uumiga hawo ee heerkulka labada heerkulbeegga, iyada oo aan la samayn wax xisaab ah.
Waxaa jira qalab kale, oo ka saxsan kii hore, oo loo yaqaan aspyropsychrometer, kaas oo mootada yar ay hubiso in heerkulbeegyadu ay si hawo leh u socdaan.
Sidaad arki karto, markay tahay saadaasha hawada iyo cilmiga cimilada, qoyaanku waa muhiim.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Muhiimadda qoyaanka ee saadaasha hawada
Maqaal aad u fiican oo sharaxaad badan, waxaan kuugu hambalyeynayaa shaqada aad qabato, salaan ..
Jawaab José Alberto
Maqaal aad u fiican Jarmal Portillo, ma ogtahay sida qoyaanka ku jira shey ka samaysan kartoon ama warqad loo nuugo karo?
Ama haddii aan laga bixi karin, yaree% qoyaanku!
Jawaab Raul Santillan
Caddaynta jiritaanka isbeddelka cimilada
Badda Dhiman miyaa la waayi karaa?